बेथितिको कथा–“विकास भर्सेस निकास”- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
बेथितिको कथा–“विकास भर्सेस निकास”
असार १७, २०७६ सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — सरकार यतिबेला ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमा छ । विकासको नाममा हरेक क्षेत्रमा बेथिति र विसंगतिले कसरी जरा गाडेको छ ? मुलुकको पहिचान र मौलिकतालाई बिर्सेर आधुनिक विकासका नाममा के कस्ता उन्नति र निकास खोजिरहेका छौं ?
पसिना र श्रमको कसरी अवमूल्यन भइरहेको छ र चाकडी संस्कृति कुन हदसम्म मौलाउँदै गइरहेको छ ? यी सबै प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ दिन्छ नाटक ‘विकास भर्सेस निकास’ ले ।
सर्वनाम थिएटरमा नियमित मञ्चन भइरहेको नाटकले डाक्टर एसडी नामक पात्रमार्फत मुलुकमा विद्यमान शिक्षा, स्वास्थ्य, धर्म–संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिलाई उजागर गरेको छ । शक्तिको पहुँच भएन भने क्षमता मात्रैले पनि केही हुँदैन भन्ने सन्दर्भ डाक्टर एसडीको भूमिकामार्फत पुष्टि हुँदै जान्छ । आफ्नै मुलुकमा केही गर्न खोज्दा कतै पनि उनले उचित ठाउँ भेट्टाउन सक्दैनन् । ऊनी यस्तो सशक्त पात्र हुन्, जसले योग्यता भए पनि देशमा कुण्ठित भएर बसेका हजारौं युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
भौतिक विकासतिर मुलुक जतिसुकै लम्के पनि मानिसको सोच र स्वास्थ्य अवस्था अति नै नाजुक भएर गएको पक्षलाई पनि नाटकले सबल रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । कामभन्दा पनि नाम र पदको पछिपछि मानिस कसरी दौडिरहेका छन् भन्ने प्रश्न नाटकले उठाउँछ । नेपाली समाज र राजनीतिको यथार्ततालाई चित्रण गर्न खोज्ने क्रममा नाटक तयार भएको निर्देशक तथा लेखक रामबाबु रेग्मीको भनाइ छ ।
राजधानीको रत्नपार्कमा घुम्दा भेटिएका चरित्र, विषयवस्तु र गोरखाका विभिन्न थलोमा सडक नाटक गर्दाको अनुभवबाट यो नयाँ नाटक जन्मिएको उनले बताए ।
आखिर यो देश कसको ? आधुनिक विकासका नमुनाहरू कसका लागि ? नाटकले अर्को गम्भीर प्रश्न गर्छ । जस्तो कि सहरमा ठूलाठूला भवन र महल छन् । बाटो हिँड्ने बटुवाका लागि भने चाहेको बेला शौच गर्ने एउटा शौचालय पनि छैन । पिउने पानी त धेरै परको कुरा । उता शौच गर्न पाँच रुपैयाँ खर्च गर्नुकोसट्टा भट्टीमा गएर मदिरा सेवन गर्ने निम्न
वर्गीय चरित्रका आफ्नै कथा व्यथा छन् । रक्सीको गिलास हुँदै मृगौलाको रोगसम्मकोयात्रा हाम्रै समाजभित्र भेटिने पात्रहरूकै कथाजस्तो लाग्छ ।
निर्देशक रेग्मीका अनुसार ‘हामी जता हावा चलेको छ, त्यतैतिर लम्किरहेका छौं ।’ जसकारण ‘हाम्रो भनेर गर्व गर्ने मौलिकताहरू मास्सिदै गएका छन् ।’ खानेकुरा, गीत संगीत, जीवनशैलीदेखि विकासका परियोजनाहरूले नेपालीपन र मनलाई खासै प्रवर्द्धन गर्न सकिरहेको छैन । विदेशमा लामो समय बसेर आफ्नै मुलुकको कुनै एक विकास
परियोजनामा लगानी गर्छु भनेर आएका एनआरएन पात्र एसडी अन्तिममा शौचालय उद्घाटन गर्न पुग्छन् ।
मुलुकमा भइरहेको विकासको मोडलप्रति यो ठूलो व्यंग्य हो । रंगकला गोर्खाको प्रस्तुतिमा रहेको नाटकमा एसडीको भूमिकामा दीपक आचार्य छन् । मिलन गरुङ, विक्रम माझी, गौरव सापकोटा, सन्दिप घिमिरे, उमाकान्त सापकोटा, प्रकाश कट्टेल, अमृता श्रेष्ठ, सुरज केसी, शशांक उप्रती, वीरेन्द्र मुखिया, अजय रेग्मी, प्रियना आचार्य, प्रेम अर्याललगायतको अभिनय रहेको नाटक यही असार २८ गतेसम्म नियमित मञ्चन हुने छ ।
प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०८:०९
सिरानीमा हँसिला आदिवासी
असार १३, २०७६ सुशीला तामा‌ङ
काठमाडौँ — व्यस्त ठमेल बजारकै आडमा छ दलाइ–ला आर्ट स्पेस । भित्तामा सिरानी अनि सिरानीमा उज्याला अनुहारहरू । मुलुकका विभिन्न आदिवासी आकृति नियाल्दै गर्दा कलापारखीहरू छक्क पर्छन् ।
चित्रकार मनीषलाल श्रेष्ठको काम नै यस्तो छ । उनले क्यानभास हैन, सिरानी रोजे । कलर हैन, रंगचंगी धागो खोजे । तिनै धागोलाई सम्बन्धका अनेक आयाममा व्याख्या गर्दै कलाकृति बनाए । दुई सातादेखि जारी प्रदर्शनी मनीषले साँच्चिकै सिर्जनशील काम गरेका छन् । दिवंगत आमालाई समर्पित गर्दै करिब एक वर्षअगाडि सिरानी सिरिजमा उनले कलाकृति बनाउन थालेका थिए । ब्ल्याक एन्ड हाइट रंगमा धागोको माध्यमद्वारा तयार पारिएको कलाकृतिको धेरैले प्रशंसा गरे । त्यतिबेला उनले आमाको सम्झनास्वरूप सादा रंग मात्रै चलाएका थिए ।
यति बेला भने उनकी रंगीचंगी सिरानी सिरिजतिर लिएर आएका हुन् । उनले सर्वसाधारणलाई समर्पित गर्दै विभिन्न रंगका धागोलाई कलामा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदर्शनीमा राखिएका १ सय चौध कलाकृतिहरूमा १ सय ८ वटा इन्स्टलेसन र ६ वटा धागोका क्यानभासहरू छन् ।
सिरानी पोट्रेट आर्टमा देशभित्र छरिएर बसेका विभिन्न जनजातिहरूका संघर्षको कथालाई बुझेर र तिनीहरूको मुखाकृतिलाई प्रस्तुत गरेको उनले जनाए । प्रदर्शनीमा रहेको ऊनले बनाएको धागोको कलामा भने दुई वर्षअघि उनले गरेरको ‘प्रोजेक्ट १३३६’ बाटै प्रभावित देखिन्छ । त्यति बेला उनले तयार गरेको १ हजार ३ सय ३६ मिटर लामो इन्स्टलेसन धागोको कलालाई लगभग ४ सय जनाले बोकेर काठमाडौंको बौद्ध महाचैत्यलाई परिक्रमा गरेका थिए ।
‘समाज धागोजस्तै रंगीचंगी देखेँ, मेरा कला हेर्न आउनेहरू पनि रंगीचंगी नै देखें,’ उनले अनुभव बताए, ‘तिनै मानिसबिचका सम्बन्ध धागोमार्फत फेरि पस्किन चाहेको हुँ । किनभने धागोले सम्बन्ध जोड्छ ।’ यसका लागि मेचीदेखि महाकालीसम्मको यात्रामा भेटिएको पात्रहरूको पोट्रेट लिएर सिरानी सिरिजमै सजाएको उनले बताए । उनका अनुसार सिरानीमा रहेको पोट्रेटहरू विभिन्न उमेर, लिंग, जात, पेसा र धर्मका छन् । प्रायः सबैजनाको मुहारमा उमंगको हाँसो छ ।
‘जुनसुकै स्थान र पेसामा भए पनि आफ्नो देशमै रहेर उनीहरू आफ्नै इलम गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई विदेशी भूमिमा गएर कमाउने कुनै लोभलालच छैन । आफ्नो जे छ, त्यसैमा सन्तुष्ट छन् ।’ स्वदेशमै बसेर पनि थुप्रै मानिस खुसी र सन्तोषको जीवन जिइरहेको देखाउनु आफ्नो कलाको उद्देश्य रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । यात्राकै क्रममा उनले धेरै ठाउँमा घरमा नै बसेर ऊनको धागो बनाई आयआर्जन गरिरहेको महिलाहरू देखे । उनीहरूको कामले प्रभावित भएर नै उनले त्यसलाई कलामा उतारेको बताए ।
प्रकाशित : असार १३, २०७६ ०८:००
शोषणविरुद्ध “एक चिहान”
पवनको ‘गुरुको भेट’
कहीँ नहुने जात्रा खोकनामा
क्यानभासमा वेगवान् घोडा